အမျိုးသမီး​တွေရဲ့ ဓမ္မတာလာချိန်​ဖြစ်​တတ်​တဲ့ စိတ်ကို ပြောပြတဲ့ သန္တာလှိုင် – XB Media Myanmar
အမျိုးသမီး​တွေရဲ့ ဓမ္မတာလာချိန်​ဖြစ်​တတ်​တဲ့ စိတ်ကို ပြောပြတဲ့ သန္တာလှိုင်
March 8, 2019 Bestie_Author
ဒီ​နေ့မှာ​တော့ မြန်​မာနိုင်​ငံက အမျိုးသမီးပရိတ်​သတ်​​တွေ ​လေးစားအားကျရတဲ့ ​မော်​ဒယ်​ သန္တာလှိုင်​ရဲ့ So what?အစီစဉ်​မှာ ပါဝင်​ဖြစ်​ပုံနဲ့ အမျိုးသမီး​တွေ ဓမ္မတာလာစဉ်​မှာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ စိတ်​အ​ခြေအ​နေ​တွေကို ရှင်းပြသွားပါတယ်​
“So what? Campaign က အစ်​မကို မကြာခင်​ International women’s day မှာ ထုတ်​လွှင့်​မယ့်​ ​မေးခွန်းနဲ့ အ​ဖြေ စကားဝိုင်း​လေးမှာ အစ်​မရယ်​ ​အေးမြတ်​သူရယ်​ နှစ်​​ယောက်​ စကား​ပြောထားတဲ့ စကားဝိုင်း​လေး​​ပေါ့ အမျိုးသမီး​တွေ ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး ဘယ်​လိုမျိုး ခံစားကြမလဲ ဘယ်​လိုမျိုး​အခက်​အခဲ​တွေ ကြုံ​တွေ့ရတတ်​လဲ ဘယ်​လိုဖြစ်​သင့်​လဲ ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ အ​ကြောင်းအရာ​တွေကို ​သေချာ အ​သေးစိတ်​ မိသားစု​တွေ​ရှေ့မှာ ဘယ်​လိုဖြတ်​သန်းရလဲ ဆိုတာကို ​ဆွေး​နွေးထားတဲ့ ​ပျော်​စရာလည်း ​ကောင်းတဲ့ ရယ်​စရာလည်း ​ကောင်းတဲ့ စကားဝိုင်း​လေး စပြီးလုပ်​ထဲက ဒီ So what? Campaign နဲ့ လုပ်​ခဲ့တာပါ So what? Campaignရဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​က​တော့ အမျိုးသမီးဆိုတာ အမျိုးသမီးဖြစ်​လာရင်​ ဒါဟာ ဂုဏ်​ယူစရာပါ အဲ့ဒါ​ကြောင့်​မလို့ ဓမ္မတာလာတာဟာ အမျိုးသမီး​တွေအတွက်​ ကျန်းမာ​ရေးညီညွတ်​တဲ့ ဂုဏ်​ယူစရာတစ်​ခုပါ ရှက်​စရာ မဟုတ်​ပါဘူး ဆိုတာကို မြန်​မာအမျိုးသမီး​တွေ ဂုဏ်​ယူတတ်​​အောင်​ ရှက်​စရာ​ကြောက်​စရာမလိုပဲ ကိုယ်​လုပ်​စရာရှိတာ​တွေကို ဒီအရှက်​အ​ကြောက်​တရား​ကြောင့်​ အ​နှောင့်​အယှက်​​တွေဖြစ်​ပြီး လုပ်​စရာရှိတဲ့အရာ​တွေကို မလုပ်​နိုင်​မှာ​တွေကို အစ်​မတို့က ကာကွယ်​တဲ့အ​နေနဲ့ ကာကွယ်​​ပေးပြီး​တော့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ ယုံကြည်​မှုရှိ​အောင်​ မြှင့်​တင်​​ပေးတဲ့ အဓိက ရည်​ရွယ်​ချက်​ပါ ဒီ so what? Campaign ဘယ်​​လောက်​ သွားမလဲ အထိ အစ်​မက​နောက်​က​နေပြီး supportလုပ်​​ပေးဖို့. ဆုံးဖြတ်​ထားပါတယ်​”လို့ so what? Campaign အ​ကြောင်းနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး Campaign ရဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​​တွေကို ​ပြောပြ​ပေးသွားပါတယ်​။
ဆက်​လက်​ပြီး ဓမ္မတာလာ​နေချိန်​မှာ အိမ်​​ထောင်​​ရေးအဆင်​​ပြေမှုရှိဖို့ အတွက်​ ဘယ်​လိုလုပ်​သင့်​လဲဆိုတာကို သူမအ​နေနဲ့ ” အဲ့ဒါက​တော့ အမျိုးသားကြားရင်တော့ စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် အမ ဓမ္မတာလာရင် သူလည်းလာတယ်၊အမစိတ်ဖောက်ရင် သူလည်းလိုက်ဖောက်တယ်၊ အစ်​မက စိတ်​တိုရင်​ သူလည်း အပြိုင်​တိုတယ်​ အခုအဲ့​တော့ အစ်​မက ဘာလုပ်​လဲဆို​တော့ ဒီ Campaignကို ပြပြီး​တော့ အစ်​မရဲ့ အမျိုးသားကို ဒါက တစ်​ကယ်​ကြီးကို သူ့စိတ်​ထဲမှာ ဒီအမျိုးသမီး​တွေက ရာသီလာတဲ့ အချိန်​ စိတ်​တိုတာ စိတ်​​ဖောက်​တာက အလကားအပို​တွေ အခွင့်​​ကောင်း လိုချင်​လို့ ဒါကြီးကို အခွင့်​အ​ရေးတစ်​ခုအ​နေနဲ့ ယူပြီး​တော့ သက်​သက်​မဲ့ လုပ်​​နေတာလို့ သူက ထင်​​နေပုံရတယ်​။
အဲ့​တော့ အစ်​မက ဒီအမျိုးသမီး ရာသီလာတာနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး တင်​လိုက်​တဲ့ အစ်​မရဲ့ social influence page​လေးမှာ တင်​လိုက်​တဲ့ အခါမှာ အမျိုးသမီး​တွေ အများကြီး လာပြီး​တော့ ​ရေးကြတယ်​ တစ်​ခါတစ်​​လေ လူသတ်​ချင်​စိတ်​​ပေါက်​တယ်​တဲ့ အ​ကြောင်းအရာမရှိပဲ စိတ်​တိုတယ်​ ငိုချင်​တယ်​ တစ်​ချို့​တွေကျ​တော့လည်း အသိတရားရှိပြီး ကိုယ်​ချင်းမစာနာတဲ့ အ​မေ နှမချင်း မစာနာတဲ့သူ​တွေကျ​တော့ လက်​ဖက်​​ကျွေးပစ်​မယ်​တို့ ဘာတို့ ဒါ မသိလို့​ရေးတာမဟုတ်​ဘူး သိသိကြီးနဲ့ သက်​သက်​မဲ့ အကြင်​နာတရား မရှိတဲ့လူ​တွေ ​ရေးသွားတဲ့ Comment​တွေ​တော့ရှိတယ်​ အဲ့ဒါမျိုး​တွေကျ​တော့ အစ်​မက လက်​မခံဘူး ဖျက်​ပစ်​တယ်​ ဒါလည်း တစ်​ခုနှစ်​ခု​လောက်​ပါပဲ ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ကယ်​​ရေးသွားတဲ့သူအကုန်​လုံးက အကြင်​နာကို နားလည်​မှုကို လိုချင်​လို့ ​တောင်းဆို​နေကြတဲ့ အမျိုးသမီး​တွေ အများကြီးရှိ​နေတာကို ​တွေ့ရတယ်​ အဲ့​တော့ အစ်​မက အမျိုးသားကို comment​တွေ သွားဖတ်​ကြည့်​ဆို​တော့ သူမဖတ်​ရဲဘူး ရတယ်​တဲ့ ပြီးရင်​ဖတ်​မယ်​ ပြီးရင်​ဖတ်​မယ်​နဲ့ အဲ့ဒီ​တော့ ဒီဟာ​တွေက ကိုယ်​တစ်​​ယောက်​ထဲ မဟုတ်​ပဲ အမျိုးသမီး​တွေ အကုန်​လုံးက ​တောင်းဆို​နေတဲ့ အရာဆိုတာကို သူသိသွားတဲ့ အချိန်​မှာ ဒါက​နောက်​ဆုံးဖြစ်​ခဲ့တဲ့ အဖြစ်​အပျက်​​ပေါ့ ​နောက်​လက​နေစပြီး​တော့ သူဘာဖြစ်​မလဲ အစ်​မ​စောင့်​ကြည့်​​နေမယ်​ မကြင်​နာဘူးဆိုရင်​ ​နောက်​တစ်​ခါ ဒီလိုမျိုး interview မှာ ထပ်​ပြီး​ပြောအုံးမှာပါ”လို့ အမျိုးသမီး​တွေရဲ့ ဓမ္မတာလာချိန်​ဖြစ်​တတ်​တဲ့ စိတ်​ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်​
“ဒီလိုကိစ္စကိုက မကြုံဖူးလို့ နားမလည်​လို့ ​ပြောတာဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ယုံရလည်း ခက်​မယ်​​လေ ဘာဖြစ်​လို့လဲဆို​တော့ ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင်​​တောင်​ ကိုယ့်​ဘာသာကို သိ​နေတယ်​ ဘာမှ အ​ကြောင်းအရာလည်း မရှိ ဝမ်းနည်းစရာလည်း မရှိပဲနဲ ငိုချင်​​နေတယ်​ ဘာမှမဟုတ်​တဲ့ အဖြစ်​​သေး​သေး​လေး စိတ်​တိုစရာမဟုတ်​တဲ့ဟာကို ​ပေါက်​ပြီး​တော့ ထုခွဲလိုက်​တဲ့ထိကို စိတ်​တိုသွားတဲ့ ကို​ယ့်​ကိုယ်​ကိုလည်း နားမလည်​ဘူးဆို​တော့ ကိုယ့်​ကို​ယ်​ကို​​တောင်​ ဒီလို နားမလည်​​လောက်​​အောင်​ ဒီလိုမျိုး စိတ်​​တွေ​ဖောက်​ပြန်​တာက ​ဘေးနားက တစ်​ခါမှ မကြုံဖူး မဖြစ်​ဖူးတဲ့ လူဆိုလို့ရှိရင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ပြီး နားလည်​နိုင်​မှာလဲ ဆိုတာကို အစ်​မတို့ ကို​ယ်​ချင်းစာပြီး​တွေး​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ဒါက​တော့ ကိုယ်​ကို​ယ်​တိုင်​လည်း ကြုံတဲ့အတွက်​ ကိုယ်​ချင်းလည်းစာပါတယ်​ အစ်​မတို့ Gymမှာ ဆိုလို့ရှိရင်​ အမျိုးသမီး​တွေအတွက်​ အမျိုးသမီး ဓမ္မတာ စက်​ဝိုင်းကို တစ်​ခါထဲထည့်​​ပေးထား​ပြီး​တော့ အစ်​မတို့ Gymမှာ fitness Diaryဆိုပြီး​တော့ ရှိတယ်​ ကိုယ်​တစ်​​နေ့ တစ်​​နေ့ ဘာ​တွေစားလဲ ဘာ​တွေ​သောက်​လဲ အိပ်​ချိန်​က ဘယ်​​လောက်​လဲ ​ရေဘယ်​​လောက်​ ​သောက်​ထားလဲ ဘာ​တွေ ဘာ​တွေ workoutလုပ်​ထားလဲ အဲ့ဒါ​တွေအကုန်​လုံး workoutလုပ်​ထားတဲ့ အစ်​မတို့ရဲ့ အမျိုးသား trainer များတာ​ပေါ့​​နော်​ ဒီအမျိုးသားtrainer​တွေနဲ့ အားကစားလာလုပ်​တဲ့ အမျိုးသမီး​တွေနဲ့ ​သေချာထိုင်​ပြီး​တော့ ​ဆွေး​နွေးရတယ်​ အဲ့အချိန်​ကျလို့ရှိရင်​ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ ဒီဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စဘယ်​ရက်​ ဘယ်​ရက်​ ​ရောက်​​နေပြီဆိုတဲ့ စက်​ဝိုင်း​လေးမှာ မရှက်​မ​ကြောက်​နဲ့ ​ဆွေး​နွေးကြတယ်​ တစ်​ခါတစ်​​လေကျ​တော့လည်း အမျိုးသမီး​တွေက အခွင့်​​ကောင်းယူချင်​တာ​ပေါ့ ဒီ​နေ့က​တော့ ဟိုဟာလာမှာမလို့ မလာ​တော့ဘူး အလုပ်​မလုပ်​ချင်​ဘူး​ပေါ့ အဲ့ကျ​တော့လည်း အစ်​မတို့ဆီက အမျိုးသားtrainer​တွေက အရမ်းကို ​ကြောက်​ပြီး​တော့ ရှက်​ပြီး​တော့ ဒါက ဖြစ်​​နေလည်း လုပ်​လို့ ရတယ်။
​ အစ်​မကိုယ်​တိုင်​ ပျင်း​နေလို့ မလုပ်​ချင်​ဘူးဆိုလည်း ဒီရက်​​တော့ နား​ပေးလို့ ရပါတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီဟာကို အ​ကြောင်းပြပြီး​တော့ အခွင့်​​ရေးယူချင်​လို့ ​လေ့ကျင့်​ခန်း မလုပ်​ချင်​ဘူးလို့ ကိုယ့်​ကို​ယ်​ကို မလိမ်​နဲ့​ပေါ့ အဲ့လိုမျိုး​လေး​တွေ​ပေါ့ အစ်​မတို့က နားလည်းလည်​​ပေးတယ်​ ပိုပြီး​တော့လည်း supportလုပ်​​ပေးတယ်​ ပြီး​တော့ ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင်​ ဆိုရင်​လည်း တကယ်​မလုပ်​နိုင်​တဲ့ ​နေ့​တွေဆိုရင်​ အစ်​မ ရာသီလာ​နေတဲ့ အချိန်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​လို့ ရလား တို့ဘာတို့ ဆို အစ်​မအ​ဖြေက​တော့ အမြဲတမ်း တူတူပါပဲ ကို​ယ်​လုပ်​နိုင်​သ​လောက်​​လေးကို ရာသီလာတဲ့အချိန်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ မလာတဲ့အချိန်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ကိုယ်​နိုင်​သ​လောက်​ကိုပဲ လုပ်​ပါ မနိုင်​တာကို ဒီထက်​ပို မလုပ်​ပါနဲ့လို့ အဲ့​တော့ ကိုယ်​နားချင်​တယ်​ဆိုရင်​ နားဖို့အခွင့်​အ​ရေးက ​ယောက်ျား​လေး​တွေဆီမှာ မရတဲ့ အခွင့်​အ​ရေးမလို့ ယူပါလို့ ​ပြောချင်​ပါတယ်​”ဆိုပြီး သူမရဲ့ Gymမှာ ​တွေ့ကြုံရတဲ့ လာကစားတဲ့သူ​တွေအ​ကြောင်းလည်း ​ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်​။
“ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ ဒီအသားအ​ရေကြည်​လင်​ဖို့ ခန္ဓာကို​ယ်​ အချိုးအစား ဒါ​တွေအကုန်​လုံးက ခန္ဓာကိုယ်​ထဲမှာ ရှိတဲ့ ​ဟော်​မုန်း​တွေက ထိန်းချုပ်​ထားတာပါ အဲ့​တော့ ဒီခန္ဓာကို​ယ်​ထဲမှာ ရှိတဲ့ ​ဟော်​မုန်း​တွေကို အပြင်​က Chemical ​ဟော်​မုန်း​တွေနဲ့ မ​ရော​နှောပါနဲ့ မ​နှောင့်​ယှက်​ပစ်​ပါနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ထဲမှာရှိတဲ့ ​ဟော်​မုန်း​တွေက ညီညီမျှမျှနဲ့ လိုသ​လောက်​ လည်​ပတ်​​နေဖို့အတွက်​ အဓိက အ​ရေးကြီးတာက​တော့ ​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်​ဖို့ပါပဲ အသားအ​ရေကြည်​လင်​ဖို့ ဆိုတာလည်း ဒီ​ဟော်​မုန်း​တွေက ထိန်းချုပ်​ထားတဲ့ အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်​တာဟာ အသား​ရေအတွက်​​ရော ခန္ဓာကိုယ်​အချိုးအစားအတွက်​​ရော ကျန်းမာ​ရေး ဒီခန္ဓာကိုယ်​မှာ လိုအပ်​တဲ့ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ နုပျိုဖို့ ကြီးထွားမှု ဒါ​တွေအကုန်​လုံးကို ထိန်းချုပ်​ထားတာဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​ဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့ ​ရေများများ​သောက်​ပါ ပြီး​တော့ အသားရည်​အတွက်​​ရော အရိုး​တွေ အတွက်​​ရော သန်​မာပြီး စို​ပြေ​နေဖို့အတွက်​က နို့စစ်​စစ်​ကို​သောက်​ပါ ဒီနို့စစ်​စစ်​ထဲမှာ ပါတဲ့ ​ကောင်းတဲ့ bacteria ​တွေက လူရဲ့ နုပျိုမှုကို အရမ်းအ​ထောက်​အကူပြု​ပေးထားပါတယ်​ အဲ့​တော့ ​ရေ​သောက်​ပါ နို့​သောက်​ပါ stressမများပါ​စေနဲ့ အိပ်​​ရေးဝဝ အိပ်​ပါလို့” ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး အကြံ​ပေးသွားခဲ့ပါတယ်
အခုလိုသတင်းထူးတွေ သို့မဟုတ် စာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အမြဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အပေါ်ဆုံးမှာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပါ သို့မဟုတ် သတင်းတစ်ပုဒ်အပြီးမှာ XB Media Myanmar ဆိုပြီးပေါ်လာရင် Like ဆိုတဲ့စာသားလေးကို နှိပ်ခဲ့ပေးပေါ။ နှစ်ခုလုံးမပေါ်ရင်တော့ Like လုပ်ထားပြီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားပေးတဲ့ စာဖတ်သူအပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရင် (Share)မျှဝေပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အမေစုကို လိုက်လံစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကိုယ်ရံတော် ချယ်ရီထက် ကားပေါ်ကပြုတ်ကျတဲ့ ဗီဒီယို လူမှုကွန်ယက်မှာ လူပြောများ
ပြင်သစ် Bugatti က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကား
ဦးတီနဲ့အတူနှဈယောကျသားကွညျကွညျနူးနူးလေးအပွငျခနထှကျတဲ့အခိုကျအတနျ့လေးကို ဓာတျလေးဖမျးပွီးမြှ ဝေ ပေးလာတဲ့ အူဝဲ November 24, 2020
အမနေဲ့ခဈြသူတို့နှဈယောကျထဲမှ ဘ ယျ သူ့ကိုပိုခဈြလဲလို့ မေးလာခြိနျမှာ ပွတျ ပွတျသားသားနဲ့ တဈခှနျးတညျး ဖွလေိုကျတဲ့ ဟဲဗီးဖွိုးရဲ့Tik Tok November 24, 2020
အောငျမွငျတဲ့ဘဝကိုရခဲ့ပမေယျ့ အ ကွျောရောငျးတဲ့အလုပျကို မစှနျ့လှတျ ဘဲ ခဈြဇနီးနဲ့အတူ မောငျတဈထမျး မယျ တဈရှကျလုပျကိုငျနတေဲ့ သားငယျ November 24, 2020
သရုပျဆောငျ ဟိနျးဝယေံနဲ့ ရငျးရငျး နှီးနှီး ပတျသတျမှု တဈခုအကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ တေးရေး ဝကွေီး November 24, 2020
မိမိကိုယျတိုငျကွိုးကွိုးစားစားနဲ့ခြုပျထားတဲ့ Mask လေးတှကေို လိုအပျ တဲ့နရောတှအေတှကျသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျ November 24, 2020
အနယျနယျအရပျရပျကနေ ပငျ့ဆောငျ ကိုးကှယျထားတဲ့ ကွညျညိုစရာ ဗုဒ်ဓရုပျ ပှားတျောမြားကိုပရိသတျတှေ ဖူးမွျော နိုငျအောငျ live လှငျ့ခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြရဲ့ ဗီဒီယို November 24, 2020
လူပီသခငျြတဲ့အကွောငျး ပွောလာတဲ့ ထူးအယျလငျး November 24, 2020
ကိုဗဈ Positive ထိသှားပွီဆိုတဲ့ အ ကွောငျး စိတျမကောငျးစှာမြှဝေ လာ တဲ့ နလေငျး November 24, 2020
(၁၈)နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေးအတှကျ အ နုပညာကွေးလေးတှစေုထားပွီး ဝေ ဘာဂီဆေးရုံကွီးမှာ ငှကေပျြ(၁၈) သိနျး သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ စံထိပျ ထားဦး November 24, 2020
တောထဲမှာ ရိုကျကူးရေး လုပျနရေငျး ဝိဥာဥျ၊သရဲ တှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့တဲ့ အဆို တျော ခယျြရီသငျး November 24, 2020